Nandray anjara tamin'ny fetibe PATA Dream to Travel ny birao fizahan-tany any Nepal
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nandray anjara tamin'ny fetibe PATA Dream to Travel ny birao fizahan-tany any Nepal
Birao fizahantany Nepal NTB dia nandray anjara tamin'ny Dream to Travel Festival, natombok'i The Pacific Asia Travel Association (PATA). Ny fetibe izay hazakazaka mandritra ny efa-bolana dia hetsika an-tserasera izay mampivondrona ireo orinasam-barotra fivarotana manerantany hianatra tambajotra, ary hankalaza ny herin'ny dia mandritra ireo fotoan-tsarotra ireo. NTB dia nampiantrano ny programa VISIT Nepal tamin'ny festival, nampiranty an'i Nepal ho toerana fizahan-tany ho an'ny fahasalamana sy ny fanarenana vatana, saina ary fanahy amin'ny fomba vaovao. Nitohy tamin'ny 6-10 Jolay ny fivoriana manokana an'i Nepal.
Ny andro voalohany tamin'ny fandaharana dia nahita ny fampahalalana momba ny toerana falehan'i Nepal natolotry ny mpitantana NTB Andriamatoa Bimal Kandel sy Q na, izay tamin'io andro io ihany, nandritra ny fotoana niainana mivantana, dia nanolotra karazana famoronana momo i NTB, izay nahitan'ny chef master iray ny fahandroan'ny sakafo matsiro, izay sakafo be mpitia ao Nepal.
Tamin'ny 7 Jolay, ny PATA Dream to Travel Forum dia nanasongadina ny maha-zava-dehibe ny fanasitranana ara-panahy sy ny fanavaozana ny fizahantany. Minisitry ny kolontsaina, fizahan-tany ary fiaramanidina sivily hajaina Yogesh Bhattarai nizara fahitana momba an'io lohahevitra io nandritra ny resadresaka mivantana nataon'ny firesahana BBC News. Nanatevin-daharana azy avy eo Dr Dhananjaya Regmi, CEO CEO NTB ary tompon'andraikitra hafa ao amin'ny Nepal Tourism Board, European Travel Commission, ny Governemanta Nepal, ary ny ACE Hotels tamin'ny adihevitra momba ny fomba hanamafisana ny fanasitranana sy ny fahasambarana ho an'ireo mpiara-miombon'antoka fizahan-tany.
Tao amin'ny Session Fahalalana tao amin'ny PATA Dream to Travel, Ramatoa Nandini Lahe Thapa, Tale ambony misahana ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy fampiroboroboana ao amin'ny Nepal Tourism Board dia nizara famelabelarana momba ny vatana, saina ary fanahy: fanalefahana sy fizahan-tany ara-panahy amin'ny taonan'ny COVID-19. Nasongadin'ny famelabelarana fa ny ara-dalàna vaovao dia tsy vitan'ny fitsidihana na toeran-javatra fitsangatsanganana an-tampon-tany, fa toerana koa hamelomana sy hanasitranana ara-panahy milaza ny fifandraisantsika nomerika, nefa mbola tsy mifandray. Nanatevin-daharana azy ireo manam-pahaizana momba ny dia tao amin'ny tontolon'ny dinika momba ny fomba ahatongavana eo Nepal dia iray amin'ireo toerana fanasitranana ho an'ny vatana, saina ary fanahy. Ny fifanakalozan-kevitra dia niompana amin'ny fotoana vaovao mahaliana eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany, nateraky ny fiovan'ny besinimaro tamin'ny fitondran-tena ara-pahasalamana sy fahasalamana.
Tamin'ny andro farany tamin'ny programa VISIT Nepal, ny Birao fizahan-tany ao Nepal sy Andriamatoa Anil Chitrakar, mpanorina ny toby tontolo iainana momba ny fiarovana ny tontolo iainana sy mpiara-manorina ny Himalayan Climate Initiative dia nanao seho mivantana tao amin'ny Lumbini, Nepal, izany hoe toerana nahaterahan'i Buddha. Nanazava ny drafitra lehiben'ny fotodrafitrasa Lumbini, ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Gautam Buddha, ary ireo lova ara-tantara hafa ao amin'ilay toerana, Andriamatoa Chitrakar dia nanazava fa ny Lumbini dia tsy ny toerana hitsidihana ny toerana nahaterahan'i Lord Buddha ihany, fa be dia be ny zavatra azo atolotra.
Nandray anjara tamin'ny dinika samihafa koa ireo tompon'andraikitra NTB. Ny hetsika virtoaly- Dream to Travel Festival, mampivondrona ny varotra dia amin'ny alàlan'ny fahafaha-manao tsy manam-petra amin'ny traikefa nomerika, dia haharitra mandritra ny efa-bolana amin'ny 22 jona-17 jolay 2020.
Raha hamaky vaovao bebe kokoa momba ny fitsidihan'i Nepal Eto.